Iilwandle zaseMzantsi 5 | Ulwandle olugqibeleleyo | Wifi | Imibono engakholelekiyo
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBarry And Kim
Ihlaziywe ngokutsha kwaye ineembono ezimangalisayo ngaphezulu kwe-Knights Beach, le yenye yezona ndawo zilungileyo ukonwabela iholide eyifaneleyo.
ibekwe kumgama nje omizuzu emi-5 ecaleni kwendlela yokuhamba ngaselunxwemeni ukuya eHorseshoe Bay ukuze uqubhe okanye utye kwiFlying Fish Cafe okanye iPort Elliot Surf Life Saving Club.
Ngaphantsi nje kwemizuzu emi-5 ukuhamba kuya kukusa entliziyweni yePort Elliot kunye nevenkile yokuthenga, iikhefi kunye nee-pubs.
Kuninzi okukonwabelayo, imoto ingahlala ipakishwe kwindawo yayo yokupaka ngalo lonke ixesha lokuhlala.
Yonwabela ikofu yasekuseni okanye iglasi yewayini yasemva kwemini kwibalcony yegumbi lokulala ngelixa ujonga izinto ezibonwayo kunye nezandi zolwandle, abakhenkethi kunye nabahamba ngolwandle.
Ipropathi ngokwayo iza ixhotyiswe kakuhle ngeendawo zokuhlala ezivulekileyo kunye negumbi lokutyela. udonga olufakwe kwi-smart tv kunye ne-wifi engenamkhawulo ibandakanyiwe. Zisa ezakho iinkonzo zostrimisho lokungena iinkcukacha.
Ikhitshi elitsha kraca elinako konke onokukufuna ukuze upheke isidlo. Kukho umatshini wekofu weNespresso okhoyo ukuba unqwenela ukwenza eyakho ikofu kwaye ukonwabele iimbono ezisuka ekhaya.
Ngasemva kukho intendelezo encinci enetafile kunye nezitulo kunye ne-BBQ yegesi. Ezantsi uya kufumana nendawo yokuhlamba impahla kunye neyesibini yangasese.
Umgangatho ophezulu ligumbi lokuhlambela elitsha elihle elineshawa enkulu, indlu yangasese kunye namampunge. Igumbi lokulala elikhulu eline-balcony kunye nemibono emangalisayo.
Kwigumbi lokulala lesibini uya kufumana ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye. Kukwakho nenye ibhedi yetrundle enye enokusekwa naphi na apho ikufanele khona. Nceda usazise ngexesha lokubhukisha ukuba le bhedi iyafuneka ukuze ilinen yokulala ilungele wena.
Lo mhlaba unokuvumela inja enye encinci ngemvume. Nceda ubuze ngexesha lokubhukisha. Intlawulo yesilo-qabane ye-75 yeedola iya kusebenza.
Ngokungqongqo akukho kutshaya kwaye akukho maqela. Izohlwayo ziya kusebenza.
Zonke ilinen yebhedi, iitawuli zeti kunye neetawuli zegumbi lokuhlambela ezibandakanya imathi yokuhlambela, iitawuli zezandla kunye nezixhobo zokuhlamba ubuso zibandakanyiwe. Nceda uze nezakho iitawuli zokuhlambela (umzimba) kunye neetawuli zaselwandle.
Iitawuli zokuhlambela zingabonelelwa nge-30 eyongezelelweyo yeedola.
Umbuki zindwendwe ngu- Barry And Kim
Niya kuyonwabela le ndlu yedolophu nonke kodwa ukuba uyasifuna, sikumizuzu nje embalwa kude.
UBarry And Kim yi-Superhost